Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA - NOLOSHA DADKA SOOMAALIYEED. QEYBTA 14-AAD - iftineducation.com
Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA – NOLOSHA DADKA SOOMAALIYEED. QEYBTA 14-AAD
Dadka soomaaliyeed waxa badiba ku hawlan yihiin sida ay naftooda waxay cunaan iyo waxa ay huwdaan ugu soo saari lahaayeen.
Waxyaabaha ay nacfiga ka helaan waxa ka mid ah xoolaha oo ay caanahooda, hilibka, subaga iyo haragaba ay isticmaalaan!
Waxay kale ay manafacaadsadaan wax yaabaha beeraha ka baxa sida Gallay, Masagada, Sisinta iwm! Sido kale kaluumeysigu wuxu ka mid yahay meheradaha ay dadka soomaaliyeed ku hawlan yihiin.
Nacfi aad u nafaqo badan waa lagu helaa. Dalalka dibadana waa loo dira haddi aynu eegno xoolaha nacfigoodu ma aha inta aynu hore u soo sheegnay ee waxaa kale ee looga faaiidaysra suuqgaynta xoolaha nool, kuwaas oo ah xoolaha loo dhoofiyo dalalka dibada.
Lacagta inaga soo gashana waxay leedahay faaiido aan la soo koobi Karin ( hard currency ) waxa lagu soo gataa waxyaalaha aan dalkeena laga helin sida baabuurta dawlad loogu shaqeeyo iyo waxii la mid ah!
Gabdhaha Soomaalida iyo Guurka Ajaanibta Oo Soo Badanaya?